सामाजिक साझेदारी बटन खेल मैदान Martech Zone
सामाजिक साझेदारी बटन खेल मैदान
शुक्रबार, जुन 1, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
तपाइँको सामग्री के राम्रो हो कि सामग्री को साझा को लागी क्षमता को सक्षम बिना नै? म सधैं आश्चर्यचकित हुन्छु जब म एक अद्भुत पृष्ठ पढ्छु र त्यहाँ या त कुनै साझेदारी बटनहरू छैनन् वा यो अनुचित रूपमा कार्य गर्दछ। यदि मैले सेयर बटन क्लिक गरेको छु र शीर्षक र वर्णन आउँदैन भने म सामान्यतया व्यस्त छु सम्पादन गर्न र त्यहाँ बाहिर धकेल्न। म भर्खरै जमानत ... थप पाठकहरू हराए
मसँग हाम्रो साइट मा प्रत्येक साझा बटन छैन। समयको क्रममा मैले ती व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरें जुन हामीलाई धेरै सान्दर्भिक दर्शकहरूको रूपमा देखा पर्दछ र म तिनीहरूलाई प्रयोग गर्छु भनेर निश्चित गर्दछु। यहाँ एक इन्फोग्राफिक छ कि ती साझेदारी बटन पछाडि समुदायहरू बीच केहि मतभेद टूट। म सामान्य रूपमा सल्लाह दिदैँ ... आफैलाई जाँच्नुहोस् र हेर्नुहोस्!
सामाजिक साझेदारी बटन प्लेग्राफ इन्फोग्राफिक द्वारा खोज एजेन्सी.
टैग: फेसबुकफेसबुक बटनइन्शर गर्नुहोस्inshare बटनLinkedInलिंक गरिएको बटनredditreddit बटनसामाजिक साझेदारीtwitterट्विटर बटन
के सामाजिक खेलहरूमा विज्ञापनले काम गर्दछ?